Transparence des données – Matp
Minisiteran'ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa Vaventy
Ny Tenin'ny Minisitra
Ireo sehatr'asa lehibe
Fanajariana ny Tany
Tanàna vaovao sy toeram-ponenana
Drafitra fanomezana ny Tsenam-panjakana
TOMBANA ARA-TONTOLO IAINANA
Zava-bita nandritra ny taona 2020 voarakitra tao anaty "Fandaharan’asa nankatoavina"
Ny asa rehetra voarakitra tao anatin’ny “Fandaharan’asa nankatoavina” dia efa natomboka avokoa.
14 343,03 Km tamin'ny taona 2020 (raha 774,30 Km kosa ny taona 2019) no halavan'ireo làlana voakasiky ny Fanamboarana, Fanavaozana, Fikojakojana mandavan-taona, Fikojakojana ara-potoana, ary ny Asa maika.
Tafiakatra avo roa heny (100%) ny zava-bita 2020 raha oharina tamin'ny taon-dasa 2019. Teo anatrehan’ny toe-bola nisy dia afaka niantoka ny fahafahana mivezivezy hatrany Minisitera tamin’ny alalan’ny fanamboarana ireo làlana tena ratsy sy tamin’ny alalan’ny fikojakojàna mandavan-taona.
Ny antsipirihin'ireo zava-bita dia azo jerena ao anaty TETIKASA
Zava-bita nandritra ny taona 2020 izay tsy nifanarahana teny am-piandohana kanefa tanteraka
Ankoatra ny asa izay efa voasoritra dia vitan’ny MATP ihany koa ireto asa ireto :
Fanamboarana làlana na “route des oeufs” mampitohy an’i Mahintsy sy Mahazaza miaraka amin’ny làlana dimy mampifandray.
Tetikasa "Projet d’Aménagement de Corridors et Facilitation de Commerce (PACFC)" izay mipaka any amin’ ny Faritra Atsimo Andrefana, Menabe, Atsimo Atsinana sy Anosy. Eo am-panatanterahana ny fanavaozana sy ny fanaovana tara ny làlam- pirenena RN9 dingana faharoa manelanelana an’Analamisampy sy Manja, fanamboarana ny tetezan’i Bevoay eny amin’ny renirano Mangoky, sy ny fanavaozana ny làlam-pirenena faha-12A mampitohy an’i Tolagnaro sy Vangaindrano miaraka amin’ny tetezan’i Ebakiky sy Masianaka.
Fanavaozana ny làlana an-tanàn-dehibe ho an’ny faritanin'Antananarivo, Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Mahajanga, Toamasina.
Fanavaozana ny làlana makany ambanivohitra
Asa vonjy maika ho an’ny làlana ankapobeny eto Madagasikara
Fanorenana sy fanavaozana ny asa izay hahafahana misokatra amin’ny Faritra maro
Fanadihadiana ny fomba hanatanterahana ireo asa goavana : Flyover, fandinihana ny fomba hanamboarana indray ny làlam-pirenena faha-6 sy faha-13
Fandinihana ny fomba hanamboarana indray ny làlam-pirenena faha-12A (Vaingandrano-Toliara)
Tabilao famintinana ny asa vita isam-paritra mifanaraka amin’ny toerana niasana ny taona 2020 (Km ara-kitsy) :
Asa vonjy maika
Alaotra mangoro 743,047 12 2,65 0 Tsindrio eto
Amoron’i Mania 242,482 0 0 6,1 Tsindrio eto
Analamanga 439,95 9 7 114,8 Tsindrio eto
Analanjirofo 301,88 0
Androy 471,504 0 0 0 Tsindrio eto
Anosy 60 50 0 0 Tsindrio eto
Anosy/Atsimo Atsinanana 44,85 0
Atsimo Andrefana 1 118,86 263,18 0 0 Tsindrio eto
Atsimo Andrefana/Menabe 165,494 0
Atsimo Atsinanana 697,88 135,24 0 0 Tsindrio eto
Atsinanana 690,86 5 0 0 Tsindrio eto
Betsiboka 464,75 0 0 174 Tsindrio eto
Boeny 392,05 0 0 0 Tsindrio eto
Bongolava 270 1 0 0 Tsindrio eto
Diana 432,018 37,48 0 165,2 Tsindrio eto
Diana / Sava 0 151 0 0
Haute Matsiatra 646,677 46,4 95,499 0 Tsindrio eto
Haute Matsiatra /Amoron’i Mania 0 0 0 100
Ihorombe 797,46 0 0 30 Tsindrio eto
Itasy 368,845 0 0 0 Tsindrio eto
Melaky 575,306 0 0 0 Tsindrio eto
Menabe 607,3 165,49 0 0 Tsindrio eto
Sava 120,237 0 0 0 Tsindrio eto
Sofia 697,3 0 0 0 Tsindrio eto
Vakinankaratra 384,32 0 0 0 Tsindrio eto
Vatovavy Fitovinany 806,924 138 0 165 Tsindrio eto
Total général 12 484 1 244 105,149 755,1 Tsindrio eto
Famitinana ny asa vita isam-paritra ny taona 2020 (Km ara-kitsy) :
Manana faniriana ny MATP mba hampisy antoka tsaratsara kokoa ny fifamezivezen’ny fiara sy ny olona manerana ny nosy ary izany dia atao mifanaraka tsara amin’ny fepetra tokony ho raisina.
Fanehoana an-kisary ny fikojakojana tamin’ny taona 2020 (fikojakojana mandavan-taona sy fikojakojana ara-potoana) (Km ara-kitsy)
Tsy azo idovirana intsony ary miverimberina hatrany ny fikojakojana ny làlana eto amintsika amin’izao fotoana izao vokatry ny fahasimbana aterakin’ny fiovan’ny toetr’andro na fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fotodrafitrasa izay ataon’ny mpampiasa làlana sasan-tsasany.
Fanehoana an-kisary ny “ASA VONJY MAIKA” vita tamin’ny taona 2020 (Km ara-kitsy)
Mba tsy hisian’ny fitokana-monina vokatry ny fahasimban’ny làlana dia mandray ny andraikiny hatrany ny MATP amin’ny alalana’ny asa fanamboarana vonjy maika.
Ireo Sampan-draharaha miankina amin'ny Minisitera
Version française Fiteny malagasy